असक्षम भन्दै कम्पनीबाट निकालिएका थिए स्टिभ जब्स, एप्पलका १० रोचक तथ्यहरु, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
असक्षम भन्दै कम्पनीबाट निकालिएका थिए स्टिभ जब्स, एप्पलका १० रोचक तथ्यहरु
एजेन्सी। अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पल बिहीबार १ ट्रिलियन (१० खर्ब) डलर बजार मूल्य भएको कम्पनी बन्यो । यो स्थानमा पुग्ने एप्पल अमेरिकाको पहिलो र संसारको दोस्रो कम्पनी हो । चीनको कम्पनी पेट्रोचाइनाले गतवर्ष यो उचाइ हासिल गरिसकेको छ । बिहीबार एप्पलको शेयर मूल्य २०७.०५ डलर पुग्यो । एप्पल विगत ७ वर्षदेखि संसारको नम्बर १ कम्पनीको रुपमा स्थापित छ । यसवर्षको जूनसम्मको त्रैमासिकमा एप्पलको रेभेन्यू १७ प्रतिशतले बढेको छ र खुद नाफा ३२ प्रतिशतले बढेको छ । २१ वर्ष पहिले कम्पनीको एक शेयरको मूल्य मात्रै १ डलर थियो । आउनुहोस् जानौं एप्पलसम्बनधी १० रोचक तथ्यहरु ।
१. एप्पल कम्पनीको सुरुवात स्टिभ जब्स र स्टिभ वोजानिकले गरेका थिए । यो कम्पनीका संस्थापकमा तेस्रो व्यक्ति रोनाल्ड वेन पनि थिए । उनले १९७६ मा कम्पनी सुरु भएको १२ दिनमै आफ्नो भागको १० प्रतिशत शेयर मात्रै ८ सय डलरमा बेचेका थिए । यदि उनले त्यो शेयर नबेचेको भए आज त्यो शेयरको मूल्य सय १ खर्ब डलर हुन्थ्यो ।
२. एप्पलको पहिलो उत्पादन एप्पल–१ कम्प्युटर थियो । तर यो कम्प्युटरमा न स्क्रिन थियो न कीबोर्ड थियो । मानिसहरु आफ्नो आवश्यकताको हिसाबले यसमा काठमो कीबोर्ड प्रयोग गर्थे ।
३. एप्पलले १९८४ मा आफ्नो कम्प्युटर म्याकिन्टोश लन्च गरेको थियो । यसको विज्ञापन टिभीमा देखाइएको थियो । यो एप्पलले आफ्नो कुनै पनि उत्पादनको विज्ञापन टिभीमा देखाएको पहिलो पटक थियो । यो विज्ञापन त्यतिबेला लामो समयसम्म सर्वोत्कृष्ट विज्ञापन मानिएको थियो ।
४. म्याकिन्टोश बजारमा पूरै फेल भयो । त्यसपछि स्टिभ जब्सलाई कम्पनीको बोर्डबाट हटाइयो । यसका साथै उनलाई सानो अफिस दिइयो । यो अफिसलाई स्टिभले साइबेरिया नाम दिएका थिए । पछि स्टिभ जब्सले आफ्नो ८५ हजार शेयर मात्रै १४ डलरमा बेचिदिए र कम्पनी छोडिदिए । यसका साथै अर्का संस्थापक स्टिभ वोजानिकले समेत कम्पनी छोडिदिए ।
५. एप्पल छोडेपछि स्टिभ जब्सले एक नयाँ कम्पनी नेक्स्ट सुरु गरे । १९९६ मा एप्पलले स्टिभ जब्सलाई फिर्ता ल्याउनको लागि उनको कम्पनी ४२७ मिलियन डलरमा किन्यो । स्टिभ जब्स त्यतिबेला नेक्स्ट अपरेटिङ सिस्टममा काम गरिरहेका थिए । एप्पलमा आएपछि यही अपरेटिङ सिस्टमको नाम म्याक एक्स भयो । सन् २००० मा स्टिभ जब्सलाई कम्पनीको सिइओ बनाइयो ।
६. स्टिभ जब्स कम्पनीका सिइओ भए पनि एप्पलका उत्पादनहरु आइफोन, आइप्याड, आइम्याकको डिजाइनको पछाडि जोनाथन पल आइभको दिमाग थियो । जोनाथल एप्पलका चिफ डिजाइनर थिए साथै उनी लण्डनको रोयल कलेज अफ आर्टका कुलपति समेत थिए । पछि जोनाथनलाई २०१२ मा बकिंघम राजदरबारमा नाइट कमाण्डर नियुत्तः गरियो ।
७. एप्पलले पहिलो पटक म्याक कम्प्युटरमा आइ अक्षरको प्रयोग गरेको थियो र यसलाई आइम्याक नामबाट लन्च गरेको थियो । यसलाई लन्च गर्दै स्टिभ जब्सले भनेका थिए ‘जब म्याकिन्टोश फेल भयो त्यसपछि हामी यस्तो कम्प्युटरमा काम गरिरहेका थियौं जसमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न सकियोस् । त्यसैले इन्टरनेटको पहिलो अक्षर आइ म्याकको नामको अगाडि जोडिएको थियो । त्यसपछि एप्पलका हरेक उत्पादनमा आइ प्रयोग गर्न थालियो जस्तै आइफोन, आइप्याड ।
८. स्टिभ जब्सले १ हजार जनाको एक टिम बनाए जसलाई आइफोन बनाउने काम दिइयो । यो प्रोजेक्टको नाम प्रोजेक्ट पर्पल राखिएको थियो । यो प्रोजेक्ट पूर्ण रुपमा गोप्य थियो । यहाँसम्म कि कम्पनीका अन्य कर्मचारीलाई समेत यसबारे जानकारी थिएन । १ हजार कर्मचारीले गातार ३० महिनासम्म काम गरेपछि २९ जून २००७ मा पहिलो आइफोन लन्च गरियो । यसलाई जन्च गर्दै कम्पनीले नारा दिएको थियो ‘यो त केवल सुरुवात हो ।’
९. एप्पलको लोगो आधा टोकिएको स्याउ छ । यसको पछाडि पनि एक कारण छ । जब्सका अनुसार एकपटक उनी स्याउको फर्मममा गएका थिए । त्यहीँ उनको दिमागमा यस्तो लोगो राख्ने सोचाइ आएको हो । तर भनिन्छ कि एपलको लोगो वास्तवमा कम्प्युटिङका संस्थापक एलर ट्युरिङलाई श्रद्धाञ्जली दिनको लागि राखिएको हो । एलर ट्युरिङले साइनाइड खाएर आत्महत्या गरेका थिए र उनको लाशसँगै एउटा आधा टोकिएको स्वाउ भेटिएको थियो । यही कारण एपलको यो लोगो राखियो ।
१०. एप्पल संसारको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो जसको बजार मूल्य १ ट्रिलियन डलर छ । एप्पलको मार्केट भ्यालू स्वेडेन, युएइ, अर्जेन्टिना, टर्की, थाइल्याड, टर्की, ताइवान, दक्षिण अफ्रिका, सिंगापुर जस्ता २२ देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनभन्दा पनि बढी छ ।